ပန်းဆိုမှ….ပန်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ပန်းဆိုမှ….ပန်း…	13
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on May 14, 2015 in Photography | 13 comments
နေရာစုံလျှောက်သွားရင်းက…. စိတ်ထဲလှသမျှပန်းလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားမိတာပါ….
Kiss me.. hurry
တောင်ပေါ်သား says: ( အမည်မသိ… ပန်းခရမ်းပြာ )
လှသဗျာ ၊ မမြင်ဖူးဘူး
ခင်ဇော် says: လှသအေ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သူလည်း ပန်းကြိုက်သွားပြီ ကိုး …။
ကောင်းလေစွ ။ :P
Alinsett @ Maung Thura says: တိန် တိန်.. (နှစ်ခါတိန်)
ကျနော့်ကိုသာ ပန်းလှလှတွေ ရှေ့ ကင်မရာကြီး ချပေးပြီး.. ရိုက်စမ်းကွာာာာာ ဆိုရင်…
Ma Ma says: လှလိုက်တဲ့ ပန်းလေးတွေ။
ဘာမှမထူးဆန်းဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ သနပ်ခါးပန်းလေးတစ်ခက်ထဲကို ရိုက်ထားတောင် လှလိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: ခြံစည်းရိုးကြားက… ပန်းခရမ်းပြာ…က ဗိုလ်ကတော်မျက်ခုံး
အမည်မသိ… ပန်းခရမ်းပြာ….က သရက်ထည်…
. ရွာကို မမေ့ကြသေးတာ ဝမ်းသာစရာ ဘဲ။
ပုံ တွေ က တကယ်ဘဲ တစ်အား လှ တာ ဟေ့။
ပါရီ က ပန်း နဲ့ ပုပ္ပါး က ပန်း ကို မျိုးစပ် ကြည့်
ထွက်လာတဲ့ အသစ်ပွါးလေး ကို ရော ရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလား။
မှတ်ဉာဏ် ထဲက ပျောက် နေခဲ့တဲ့ သနပ်ခါးပန်းလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။ :-)))
​ဒေါ် လေး says: အမည်​မသိပန်းခရမ်းပြာ ကိုကြိုက်​တယ်​
ကြောင်ဝတုတ် says: အစ်ကိုကြီးတောင်ပေါ်သားရေ….
ပန်းလေးတွေမြင်လိုက်တော့ လှလို့သာရိုက်လိုက်တယ်… တချို့ပန်းတွေ နာမည်မသိ…
ခင်ဗျားတင်တဲ့ပန်းလေးတွေမြင်တော့ ကျုပ်လဲရိုက်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေကို ပြန်လည်တူးဆွမိတာပေါ့…
ရှေ့ကနေ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးသွားနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါနော
အရင်တုန်းက လူတွေကပြောကြတယ်… မင်းနဲ့ငါကို အကြိုက်ချင်းတူသတဲ့…
အခုတော့ အရင်ကထက်ပိုပြီး တူလာပြီလို့ထင်တာပဲ…
ကျွန်တော် စစ်တွေရောက်တုန်းက ရုံးဝင်းထဲက သနပ်ခါးပင်လေးကိုကြည့်ရင်း…
ရိုက်ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးရလာတာနဲ့ ထရိုက်လိုက်တဲ့ပုံဗျ…
ကျွန်တော်မသိတဲ့ပန်းတွေကို အမည်ပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ…
မတွေ့တာကြာပြီ… ရွာကို ကျွန်တော်လဲမမေ့ပါဘူး… အခါအခွင့်သင့်ရင် ခဏတော့ဝင်ကြည့်ဖြစ်တုန်းပါ…
ပါရီမှာ ကျွန်တော်တည်းတဲ့ဟိုတယ်ရှေ့မှာရိုက်ထားတယ်… ဘာပန်းလဲတော့မသိ…
၁၀ဒီဂရီလောက် အေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကျွန်တော်အပြင်မထွက်နိုင်လို့
လမ်းဘေးနားက ကိုယ်မသိတဲ့အမျိုးတွေအများကြီး ဖြတ်သွားရင်းတွေ့တယ်…
စကားဝါပန်းကတော့ ပုပ္ပါးရီစို့မှာ အလှစိုက်ထားတာပါ…
အခွင့်အရေးရရင် ပါရီကို (၂)ပတ်လောက်သွားနေပြီး ဓာတ်ပုံချည်းရိုက်ချင်ပါသေးတယ်…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: မကြံကောင်း မစည်ရာတွေ မပြောပါနဲ့ဗျာ…
ခညား ကြိုက်တာ ခညားမိန်းမ မငယ်လေး
မတူ မတူ … မတူရေးချမတူ
ကျုပ်ပြောချင်ခဲ့တာကို ခုနောက်ပိုင်း သဘောပေါက်သွားတယ်ထင့်
တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. macro photography အကြောင်းပါ
ကျုပ် အနှစ်သက်ဆုံးသော photography အမျိုးအစားတော့မဟုတ်ဘူးဗျ…
ဒါပေမယ့် အလုပ်တဖက်နဲ့ ဘ၀မှာ ဓါတ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်ရင် အသင့်တော်ဆုံးသော ရသေ့စိတ်ဖြေ တခုပါပဲ
အဝေးကြီးသွားဖို့မလိုဘူး အချိန်တွေ ရာသီတွေ စောင့်ဖို့မလိုဘူး
ကိုယ့်အနီးအနားက အရာသေးသေးကွေးကွေးလေးတွေကိုပဲ လှအောင် ရိုက်နိုင်ဖို့ ဆန်းအောင်ရိုက်တတ်ဖို့
ပဲလိုတာပါ… ပစ္စည်းပိုင်းရော နည်းစနစ်ပိုင်း ပညာရပ်ပိုင်းလည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ ၀န်ကျဉ်းတာကိုးဗျာ..
နောက်ပြီး retouch ပိုင်းရော ဆိုပါတော့…
သည်လိုပြောလို့ ခပ်လွယ်လွယ် ပညာရပ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ
လိုက်စားရင် လိုက်စားသလို ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းမှု ရှိတဲ့ ဘာသာရပ်ပါပဲ…
(ဒီဘီးကျဲ ကြိတ်များ ခြောက်နေပလားမသိ ပန်းတွေချည်း လှိမ့်ရိုက်နေတယ်)
လို့ လေတိုက်မယ့်ဒဏ်တွေ ခံနိုင်ဖို့တော့ လိုသဗျား…
Alincho says: ဂွတ်ထ ဂွတ်ထ လှမှလှ။
aye.kk says: ပန်းတွေကအရမ်းလှ။
manawphyulay says: သနပ်ခါးပန်းတောင် ရခိုင်ရိုးမကို သွားရိုက်ခဲ့ရသလား ၀တုတ်ရယ်….